को हड्डी मा Guessing प्राचीन भारत र मिश्रको पूजाहारीहरू संलग्न र पछि यो रोमी र युनानी बारेमा सिके। एक भविष्यवाणी यस्तो उल्लेख पुरानो नियममा पाउन सकिन्छ। परिणाम घोषणा, 1 देखि6गर्न तिनीहरूले पासा फाले र बाहिर गिर कति आधारमा - देवहरूको इच्छा जान्न, अगमवक्ताहरू भेडा Bells वा सामना अंक एक फरक नम्बर carved गरिएको छ जो पशु हड्डी बाट carved पासा प्रयोग। आधुनिक घन काठ वा प्राकृतिक पत्थर बनेको, तर प्राय तिनीहरूले प्लास्टिक बनेको छन्।
घन प्रयोग अनुमान गर्न कसरी
यदि केही स्थितिहरू समारोहमा पूरा जो कोहीले, अनुमान पासा मा बोक्न सक्छ।
प्रेतविद्यासम्बन्धी लागि एक, दुई वा तीन घन प्रयोग गर्नुहोस्। हामी अनुष्ठान सुरु गर्नु अघि, टेबल मा 30-40 सेन्टीमिटरको व्यास संग एक सर्कल, कोर्नुहोस्। अँध्यारो अपारदर्शी कप बाहिर हालियो भएको हड्डी यदि होइन भने, आफ्नो हातले यो के। को हड्डी सर्कल बाहिर popping भने, enchantments फेरि बाहिर छ। पटक-पटक हानि पासा अनुष्ठान स्थगित गर्न राम्रो छ। सर्कल भित्र एक मर थियो भने, प्रश्नको जवाफ परिणाम किनारा मा अंक को संख्या निर्धारण गरिन्छ।
शुक्रवार र आइतवार र अनुमान र धार्मिक बिदा समयमा छैन पासा प्रेतविद्यासम्बन्धी अवस्थित संकेत अनुसार आयोजित गर्न सकिन्छ। बाहिर मौन मा अनुष्ठान त्यहाँ चिसो मौसम छ जब ती दिनमा राम्रो बोक्न।
कहिलेकाहीं प्रेतविद्यासम्बन्धी समयमा एक अनुहार धेरै पटक खुलेको छ। यो अपेक्षित महत्त्वपूर्ण समाचार हो। को पासा प्रत्येक अन्य मा गिरावट भने, हामी प्रेम मामिलामा र व्यापार मा सावधान हुनुपर्छ।
भविष्यमा मा कुल Guessing
कुनै पनि प्रश्नको जवाफ पनि पासा मा एक अनुमान हुन सक्छ। मान संख्या नपुगेको र तालिकामा परिणाम घट्यो। प्रयोग3पासा को भाग्य थाहा गर्न। तिनीहरूलाई को एक सर्कल मा पायो भने, र बाँकी संख्या योगफल भन्दा कम तीन त्यसपछि अनुष्ठान अवैध मानिन्छ छ।
तिनीहरूले घन के भन्छन्?
3 - इच्छा र शुभकामना पूरा;
4 - निराशाले, व्यापार मा विफलता;
5 - नयाँ मित्र राम्रो समाचार ल्याउन, इच्छा पूरा हुनेछ;
6 - अपेक्षित सामाग्री घाटा साझेदार वा मित्र निराश हुन सक्छ;
7 - संघर्ष र भ्रष्टाचार गफ गर्न, तपाईं अपरिचित संग जानकारी साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ कारण छैन;
8 - भाग मा संभवतः नकारात्मक प्रभाव असीम शुल्क;
9 - मेलमिलाप र द्वन्द्व को संकल्प, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा परिवर्तन;
10 - प्रतिज्ञा राम्रो सम्झौता, प्रतिष्ठित स्थिति, परिवारमा राम्रो-हुनुको संख्या;
11 - प्रियजनहरूलाई, तिर्सना, सम्भव रोग बाट अलग;
12 - राम्रो समाचार वा पत्र आउन जवाफ चाहनुहुन्छ जो;
13 - अर्थहीन घरधन्दा, भविष्यमा तिर निराशावादी मनोवृत्ति;
14 - नयाँ मित्र र admirers को उद्भव;
15 - नयाँ squabbles, शंकास्पद कारोबार निष्कर्षमा पुग्न गर्न परीक्षा हुनेछ;
16 - लामो यात्रा वा सकारात्मक भावना ल्याउन हुनेछ छोटो यात्रा हुन;
17 - जीवनमा मौलिक परिवर्तन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा परिवर्तन, निवास स्थान परिवर्तन;
18 - भाग्य र पूर्ण सफलता को भाग्यमानी लकीर प्रतीक्षा।
सरल fortunetelling "हो / कुनै"
त्यहाँ जब तपाईं चाँडै निर्णय गर्न आवश्यक परिस्थिति हो। यस मामला मा, पासा द्वारा प्रेतविद्यासम्बन्धी अभ्यास "हो / कुनै"। यसो गर्न, तपाईं समस्या केन्द्रित र पासा फेंक गर्न आवश्यक छ। तपाईं एउटा पनि नम्बर रोल भने जवाफ दिए, "हो," एक अनुहार एक अनौठो नम्बर अर्थ "छैन।" यो प्रेतविद्यासम्बन्धी यो परिणाम प्राप्त गर्न सजिलो तरिका हो।
भविष्यवाणी सुविधा यो धेरै समय लाग्न गर्दैन, ठोस जवाफ भन्दा अन्य कुनै पनि विकल्प विचार गर्दैन फालिएको अघि पासा धेरै सटीक प्रश्न सोध्न आवश्यक त छ।
पासा मा Guessing "हो / कुनै" यो दुई वस्तुहरु बाहिर गर्न सकिन्छ। यसो गर्न, तपाईं बस दुई पासा मा गिर भनेर अंक को मात्रा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। को घन को एक भविष्यवाणी को दायरा मा गिरावट छैन भने अवैध गर्न सकिँदैन।
एक इच्छा पूरा मा Guessing
पासा इच्छा साँचो आउन वा छैन भनेर बताउन सक्छन्। यो प्रेतविद्यासम्बन्धी को विधि प्रयोग हाम्रो युग अघि। त्यसपछि भएकोले प्रविधी परिवर्तन गरेको छैन। इमानदार जवाफ दिन इच्छा मा पासा द्वारा प्रेतविद्यासम्बन्धी गर्न, यो एक सरल वाक्य तैयार गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। कि पछि, दुई पासा आफ्नो बायाँ हात र घडीको राम्रो हल्लाउने एउटा माटो कप मा राखिनेछ। जवाफ जो घन को खुला अनुहार मा चित्रा तथ्यलाई, निर्धारण गरिन्छ।
संख्या को खोलिएको संयोजन देखाउन:
"6 + 2", "4 + 5", "1 + 3" "2 + 2" - यो इच्छा पूरा हुन्छ कि संभावना छ;
; विवादास्पद अवस्था र परिवर्तन हुन सक्छ, तर "हो" को कम सम्भावना - "6 + 3", "4 + 2", "5 +3'
"6 + 5", "4 + 1", "2 + 5", "1 + 5" - इच्छा-पूरा को एक धेरै ठूलो मौका, तर यो सबै धेरै कारक निर्भर;
"6 + 4", "6 + 6", "3 + 4", "5 + 5" - इच्छा पूरा हुन।
पासा द्वारा प्रेतविद्यासम्बन्धी बाहिर गर्दा, दुई "4" को इच्छा वा "3" को एक जोडी मा मूल्य संकेत यसको प्रदर्शन र असफलता को संभावना दुई "1" को संयोजन हो कि र "2 + 1" संकेत गर्छ कि घन सक्दैन जवाफ दिन, तपाईं एक समय मा फेरि प्रयास गर्न आवश्यक छ। "1 + 6" को संयोजन इच्छा एक समय पछि बुझे गर्न संकेत गर्दछ।
दुई हड्डी मा अनुमान गर्न कसरी
हामी पासा प्रेतविद्यासम्बन्धी दुई पासा प्रयोग आकर्षित यदि फरक परिस्थितिमा भाग्य को आवाज, हुन सक्छ थाह छ। यसलाई फेंक पासा सर्कल मा पर्दछ गर्दा एउटा प्रश्न तैयार गर्न आवश्यक छ। भने, फेरि प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्। तेस्रो समय ब्लक छैन हालियो गर्न सकिन्छ। एक पासा सर्कल बाहिर गिर भने, एक नम्बरको परिणाम खातामा लिन। गिरा अंक संख्या समेट्न छन् र त्यसपछि जवाफ प्राप्त:
1 - हो, पाठ्यक्रम;
; -2निस्सन्देह
3 - तपाईं होसियार हुनुपर्छ;
4 - बुद्धिमानीपूर्वक गर्नुपर्छ;
; -5शुभकामना को अघिबाटै जान्ने काम मा
6 - पक्कै पनि;
7 - आशा र विश्वास राख्न आवश्यकता;
; - 8 रोगी हुन
9 - एक;
10 - असम्भाव्य छ;
11 - ध्यान छैन;
12 - अवसर घटनाहरू।
भविष्यमा घन को मद्दतले भविष्यवाणी अन्य प्रकारका प्रयोग पाउन सकिन्छ।
सरल प्रेतविद्यासम्बन्धी - एक सरल जवाफ
को पासा मा Guessing एक हड्डी बाहिर गर्न सकिन्छ। हामी चिन्ता कि समस्या ध्यान र त्यो सर्कल फसे भनेर पासा फेंक गर्न आवश्यक छ। नम्बर आएको देखाउने:
1 - सकारात्मक;
2 - हस्तक्षेप गर्न अवस्थामा;
3 - आराम र समस्या पछि समाधान गर्न राम्रो;
4 - जीवनमा परिवर्तन आउने;
5 - तपाईं होसियार हुनु आवश्यक छ, हामी यो जोखिम सक्दैन;
6 - सबै राम्रो हुनेछ।
अन्य प्रेतविद्यासम्बन्धी पासा
प्रेतविद्यासम्बन्धी हड्डी को इतिहास फिर्ता धेरै शताब्दीयौंदेखि जान्छ। यो समयमा, पुजारीहरू र विभिन्न जातिका अगमवक्ताहरूले देवताहरूको इच्छा बारे सूचित गर्न, र परिवर्तनहरू बनाउन नयाँ तरिका संग आउनुहोस्। मध्य युग मा, समुद्री भाग्य निर्धारण गर्न एक तरिका फेला परेन। को डाँकुहरूको प्रतीकको क्रस हड्डी एक खोपडी थियो, त्यसैले नतिजा निर्धारण गर्न तिनीहरूले प्रयोग।4पटक फालिएको हड्डी, प्रत्येक समय नम्बर र अनौठो खुट्टाको औंलासम्म पार पनि चिन्ह लगाइयो। noughts र Crosses संयोजन गरेर भाग्य को उदारता मा न्याय गर्न सकिन्छ।
जिप्सी भाग्य-कह को हड्डी मा यो दिन लोकप्रिय छ। उहाँलाई amorous मामिलामा, प्रेम, बैठक, राजद्रोहको रुचि भएकाहरूलाई अक्सर resorted। प्रेतविद्यासम्बन्धी लागि2पासा, संख्या संयोजन विवाह वा विवाह सम्बन्धी 10 प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ जो प्रयोग गरेर।
यसलाई तिनीहरूले वरिपरि छैनन् भने पनि, आफूलाई वा आफ्नो प्रियजनलाई लागि प्रेतविद्यासम्बन्धी लगे गर्न सकिन्छ। को पासा कुनै पनि भविष्यवाणी को नतिजा जो गर्न हड्डी सही जवाफ दिनेछु सही प्रश्न सोध्न क्षमता मा निर्भर गर्दछ।
त्यो पूर्वाग्रह छ
Dmitri नाम बच्चा लागि निहितार्थ, मानिसको भाग्य आफ्नो प्रभाव के हुन्
उपचार भन्दा - को एडी मा टक्कर?
भारतीय संगीत वाद्ययंत्र: स्ट्रिङ, हावा, पक्कै
Gmail-मेल: स्थायी यसलाई हटाउन कसरी
एक housewarming पार्टीको लागि के दिन: उपहार को 17 व्यावहारिक
यस श्रृंखला को खेल "एल्डरले पाण्डुलिपिहरू" मा Auriel गरेको शील्ड